Tranolain'i Teepee miaraka amin'ny "folk" - Moi Mili
Home > Tranolain'i Teepee miaraka amin'ny "folk"
Tranolain'i Teepee miaraka amin'ny "folk"
Ny teepee tany am-boalohany miaraka amin'ny flounces sy ny fanoratana an'i Moi Mili ihany no hany tolotra toy izany any an-tsena. Izy io dia aingam-panahy avy amin'ny volavola vita amin'ny voninkazo, hosodoko amin'ny vehivavy, mpanao hoso-doko mipetraka amin'ny tanànan'i Zalipie any amin'ny faritr'i Małopolska. Ny modely floral dia noforonina manokana ho antsika mpanakanto tanora, mpanakanto sary Anna Cymerman Dąbrowska. (Annacymerman.png). Ity amboradoko miloko marevaka sy mahafinaritra ity dia mampiavaka ny tranolainay. Mifangaro tsara ny landihazo beige afangaro ao anatiny. Tsara hevitra tolo-kevitra be ho an'ny zazavavy kely izy!
Izy io dia nozairina tanteraka avy amin ny lamba landy matevina. Voaravaka frills maro dia hahafaly ny zanatsika, mamporisika ny ankizy hanana fahafinaretana.
Rehefa avy milalao dia apetraho eo amin'ny fonony ny tranolay ary apetraho eo amin'ny zoro ao amin'ny efitrano. Sarotra, kely ny habeny, ary misaotra ny sarony dia afaka mora foana maka ny tranolay ianao any ivelany.
Sary: Marta Mielczarska
Default Title - PLN 539.00 PLN